बजेट कार्यान्वय पक्ष शसक्त हुनु पर्छ – Child Pati
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभयो । उहाँले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट पेश गर्दा शिक्षामा १ खर्व ६३ अर्ब ७६ करोड अर्थात १०.६८ प्रतिशत बिनियोजित गरेको पाइन्छ ।
बजेटले सामुदायिक र नीजि विद्यालय वीचमा शैक्षिक गुणस्तरमा फरक आत्मसात गरी विद्यमान फरक घटाउँदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अधिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ साथै अपांग मैत्री बनाउने भनेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाई राख्ने नसकिएको विषयलाई ध्यानमा राखेर ४३ जिल्लामा आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सकिति २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।
विद्यार्थीहरुमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिने सम्मका योजना बनाएको छ । यसैगरी एक विद्यालय एक खेलकूदको योजना साथ साथै ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने र मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आवद्ध गर्ने विषयलाई समेत समावेश गर्नु राम्रो भएको र बजेटको कार्यान्वयन सही तरिकाले हुनुपर्नेमा नीजि क्षेत्रले जोड दिएका छन् ।
अपेक्षा भएपो निराश हुनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वय हुनसके राम्रो हो ।
टीकाराम पुरीः अध्यक्ष प्याव्सन
बजेटमा शिक्षामा नीजि क्षेत्रले साथै बिभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुबाट कति लगानी र खर्च गरिएको भन्ने बारेमा उल्लेख गर्न र नीजि क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने बारेमा केही बोलिएको छैन । बजेटमा नीजि क्षेत्रको योगदानको कदर गरेर लगानीलाई उल्लेख गर्न सकेको भए शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिशत धेरै हुने थियो ।
राज्यबाट शिक्षामा राम्रै बजेट व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसमा हेर्नुपर्ने भनेको कार्यान्वय पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने हो । दिवा खाजा, अपांग बालबालिकालाई आवासिय सुविधा, एक विद्यालय एक खेलकूद, मातृभाषामा शिक्षा, धार्मिक विद्यालयहरुलाई समेत आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा जोड्ने जस्ता विषयले राम्रै हुन सक्ला ।
सामुदायिक र निजी विद्यालय बीचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउनु खोज्नु राम्रो विषय हो । नीजि क्षेत्रको लगानी समेतको बारेमा बजेटमा केही आउला भनेर हामीमा केही अपेक्षा पनि थिएन भने निराश हुनुपर्ने कारण नै छैन । तर बजेटको कार्यान्वय भएन भने हामी निराश हुनु पर्छ ।
नीजि विद्यालय आफै सक्षम छन् । सक्षम भएकाहरुले नीजि विद्यालयमा आफ्ना छोरा छोरीलाई पढाउन ल्याउने हुन् । राज्यले सामुदायिक र नीजि शिक्षा भनेर बालबालिका माथि विभेद गर्नुहुन्न । शिक्षण संस्था नीजि र सामुदायिक होलान्, शिक्षा पनि सरकारी र नीजि हुन्छ ?
राज्य र हामी सबैको चाहना सीप सहितको व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ साथ साथै प्रविधि र संस्कारमा जोड दिनु पर्छ ।
शिक्षा त एउटै हो नि, शिक्षण संस्था मात्र नीजि र सरकारी हो भनेर कहिले बुझ्न ?
ऋतुराज सापकोटाः अध्यक्ष एन प्याव्सन
राज्यले शिक्षामा १०.६८ प्रतिशत लगानी गरेको राम्रो हो । राज्यसँगसगै शिक्षामा नीजि क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थाबाट समेत लगानी भएको छ । बजेटले यसका बारेमा बोल्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गर्नुपथ्यो । बजेटमा नीजि क्षेत्रको लगानीलाई उल्लेख गर्न सकेको भए नीजि क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानीको कदर हुने थियो ।
राज्यले बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या छ । बजेट राम्रो भएसँगै तोकिएको शिर्षकमा खर्च गर्ने र निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिएन भने बालुवामा पानी जस्तै हुन्छ । यसैले यसको कार्यान्वयन पक्ष शसक्त हुनु आवश्यक छ ।
राज्यले अहिले अगाडी ल्याएका एक विद्यालय एक खेलकूद जस्ता विषय राम्रा हुन् । यसलाई नीजि विद्यालयहरुले गत बर्षहरु देखिनै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । राज्यले नीजि विद्यालयहरुलाई विभेदकारी दृष्टिकोणले हेर्ने होइन बरु सम्मान गर्नु पर्छ । नीजि क्षेत्रले शिक्षामा आफै लगानी गर्नसक्ने अभिभावकका बालबालिकालाई शिक्षा दिएर राज्यको भारलाई कम गरेको छ ।
शिक्षालाई सरकारी र नीजि भनेर विभेद गर्न खोजिएको छ । कही शिक्षा पनि सरकारी र नीजि हुन्छ ? एउटा उदाहरण लिऔं एउटा व्यक्तिले कुनै बस किनेर भाडामा चलायो भने सार्वजनिक यातायात हुने त्यही व्यक्तिले विद्यालय खोलेर शिक्षा प्रदान गर्‍यो भने नीजि शिक्षा हुने । सोचाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । के नीजि विद्यालयमा पनि आम नागरिकका छोरा छोरीले नै पढ्ने होइन र ? बजेटमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालयका पाठ्यक्रममा सुधार गर्न खोज्नु राम्रा पक्ष हुन् ।
Previous Previous post: छोरी
Next Next post: नेपालका चर्चित कलाकार तथा रङकर्मी दयाहाङ राई